ပထမကမာ႓သားေတြဟာဆို ရွယ္လစ္စနစ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ရနိင္ မလား? | LLCO - အလင္းေရာင္ ကို ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာေသာ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔အစည္း
ပထမကမာ႓သားေတြဟာဆို ရွယ္လစ္စနစ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ရနိင္ မလား?
ခ်စ္ခင္ ေလးစားရပါေသာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔အစည္းခင္ ဗ်ား
ပထမကမာ႓သားေတြဟာဆိုရွယ္လစ္စနစ္မွအက်ိဳးအျမတ္ ရနိင္ မလား?
သင့္ ရဲ့စိတ္ဝင္ စားမွာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္
ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံသားေတြအတြက္ ရုပ္ဝထၲဳအဆင့္အတန္းအရပိုမိုနိမ့္က်တဲ႔ ေန ရာကိုဦးတည္ေနပါတယ္ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့လုပ္အားခထက္ပိုမိုအဆ ေပါင္းမ်ားစြာသာလြန္တဲ႔အရာနဲ့ဝင္ ေငြမ်ားစြာ ရ ရွိေနပါတယ္သူတို့ဟာ ညီမ်ွမွု ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အရလျဖန့္ျဖဴးထုတ္ေဝေသာ အရာထက္အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ ေငြ ေတြ ရ ရွိေနႀကပါတယ္ပထမကမာ႓နိင္ ငံသားေတြဟာသူတို့ မ်ွေဝထားတဲ့ရွယ္ယာထက္ပိုမိုအခြင့္ အ ေရးရ ေနႀကတာပါသူတို့ဟာတတိယကမာ႓ ရဲ့လုပ္အားေတြအ ေပၚအက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရ ေနႀကပါတယ္ဆို ရွယိလစ္စနစ္ေအာက္မွာပထမကမာ႓လူေတြဟာသူတို့ ရဲ့အခြင့္ထူးခံေတ တတိယကမာ႓ရဲ႔ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာအက်ိဳးအျမတ္ ေပၚမူတည္ေနတဲ့ြ ဇိမ္ခံသူတို့ဘဝေတြ ကိုစြန့္လြွတ္ ရပါမယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအဖြဲ့အစညး္ရဲ့ အသစ္ အင္ အားဟာ ပထမကမာ႓သားေတြတစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ထုတ္ေဝသူအဖြဲ႔ ရဲ႔အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ မ ေနမထိုင္ မခ်င္း ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေပါင္းလကၢဏာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြက ေတ့ာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအဖြဲံရဲ့ပထမကမာ႓ကလူေတြအတြက္ကမ္းလွမ္းေပးမယ့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာပထမကမာ႓ကလူေတြရ့ဲ ေနထိုင္ မွုအဆင့္အတန္းအားလံုးကို နိမ့္ခ်ပစ္လိုက္မည္ဆိုတာျဖစ္ပါေသာ္လည္း ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဝါဒေအာက္ မွာ ပထမကမာ႓လူတိုင္္းရဲ႔ဘဝ ေတြဟာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒနင့္အတူ အရင္းရွင္ စနစ္စားေသာက္ကုန္စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားဟာ လူဦးေရ ရဲ႔စားေသာက္မွုအ ေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို့ ရန္မလြတ္လပ္ေတာ့ပါဘူး ပထမကမာ႓လူေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစားအ ေသာက္ကိုမလိုအပ္ပါဘးူးဘာပဲျဖစ္ျဖစ္သူတို့စားသံုးေနတဲ့အရာေတြဟာ ျပင္းထန္စြာ က်န္းမာေရးကိုဆိုးရြားနိင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာအထူးအားျဖင့္လလ်င္ ျမန္တဲ့မုန့္ေတြနဲ့အစားအေသာက္ ကုန္ေတြေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ပထမကမာ႓က လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမင့္ မားတဲံအဝလြန္မွု အ ေျခအေနကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ အဲလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြဟာဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္ မွာခြင့္ မျပဳနိင္ ပါဘူးလူေတြဟာ ပိုမိုျပီးအက်ိဳးအျမတ္ ရလာနိင္ ပါတယ္ ထို့ေႀကာင့္သိပံၸပညာဟာ လူေတြကိုအခြင့္အလမးရ ေစဖိ့ု့ ရန္ အခြင့္ အ ေရးအမ်ားအျပားေပးလာမွာပါအပို အ ေနနဲ႔ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အလုပ္ကအခ်ိန္နင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေတြမွာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖိ့ု ရန လိုအပ္တယ္ဆိုတာကု္တြန္းအားေပးမွာပါ အလုပ္ခ်ိန္နင့္ ေက်ာင္းဟာ ေလ့က်င္ခန္းျပဳလုပ္ဖိ့ု ရန္ ေနရာေတြ ရွိလာနိင္ ပါတယ္ ေနာက္ဆံုးအ ေနနဲ့လူေတြဟာဆို ရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မွုျပည္႔ဝစြာ ရလာနိင္ ပါတယ္ ထို့ေႀကာင့္ ပထမကမာ႓ကလူေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္တြင္ ရုပ္ဝထၲဳပစၥည္းပိုင္းအရ ဆင္းရဲသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းပိုမိုက်န္းမာေကာငိးမြန္တဲဘဝေတြကိုဦးတည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ က်န္းမာတဲ့လူဟာအ ေပ်ာ္ ရြွင္ ဆံုးလူပါ. အဓိပ္ပာယ်ဘဝ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်မော်ဝါဒီလူကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။ မော်ဝါဒီရဲဘော်တွေ၌ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မော်ဝါဒီလက်အောက်တွင်တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေပညာပေးနှင့် remold ဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုအများအပြားပီပီအလေ့အကျင့်, မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရန်သူများကိုနှစ်ဦးစလုံးခဲ့ Maoism ၏ဧရာမကျောင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဤအစီအမံလုပ်အားနှင့်အကျဉ်းထောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရန်, မော်စီတုန်းအတွေးအခေါ်အသင်းများနှင့်အတန်းငှါ, လူထုရှေ့တော်၌ဝေဖန်မှုများနှင့် Self-ဝေဖန်မှုကနေအကွာအဝေးသို့ပွေးလေ၏။ လုပ်အားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်, လူနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရဖို့အထုနှင့်အတူခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့သင်ယူဖို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏလူများရှေ့သို့အဖြစ် High-ပေးအပ်ဗျူရိုကရက်လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်ကေဒါအဘို့အညွှန်းခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကေဒါနှိမ့်စေခြင်းငှါထုများ၏အတိဒုက္ခ၏သင်ယူဖို့, သူတို့ကနေသင်ယူဖို့ကျေးလက်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဟောင်းတကယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး Pre-ရက်စွဲပါ။ ဒါဟာနှောင်းပိုင်းတွင် 1950 အနည်းဆုံးနောက်ကျောမဟာ Leap Forward ကိုမှသွားကြ၏။ အဲဒါဟာ ကန့်သတ်ထားသောအောင် မြင် မှုနင့်အတူ လေ့ကျင့်တတ်မြောက်ပြီး ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပညာရေးလှုပ် ရှားမှု မှ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးသို့ဦးတည်ခဲ့သော လှုပ် ရှားမှုများတွင် လည်းအောင် မြင် ခဲ့ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဟာ လက်တွေ့ကျခဲ့ပြီးအဆင့် အသစ်များသို့ မြင့် တက်လာခဲ့ပါတယ် မေလ7ကေဒါကျောင်းများတစ်ခုလုံးကိုစနစ်ကလုပ်အားမှတဆင့်ကေဒါတကျရေးနှင့် remolding ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးရဲ့အမြင့်မှာတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွင့်အနီ, အစောင့်တစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုမျိုးဆက် မှစ. 1968 မှလယ်သမားထံမှလေ့လာသင်ယူရန်ဆင်းစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဤသူတို့သည်အနီအစောင့်များ၏အများစုကနှိမ့်ချခြင်းနှင့် reeducated ခံရဖို့လိုအပ်သောသူတို့အားတရုတ်ကျေးလက်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်သကဲ့သို့ 1968 ခုနှစ်ကနေ 1970 မှကျေးလက်၏စုပေါင်းစီးပွားရေးကိုဒီနိုင်ငံမှာပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အစွန်းရောက်တွန်းအားပေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပထမ Worlders လည်း “ရန်ကိုစလှေတျစခွေငျးငှါ အမှန်တကယ်အဖိနှိပ်ခံအဘို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျေးလက်, “တတိယကမ္ဘာ, ။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေ process ကိုပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းတစ်မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားဒီဖြစ်နိုင်ချေ process ကိုပထမဦးစွာ Worlders ၏, အချည်းနှီးသောဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်မကြာခဏငြီးငွေ့စရာနှင့်ခြောက်ဘဝအဆုံးသတ်တဖြစ်လိမ့်မည်။ အဲဒီအစားပထမဦးစွာ Worlders တတိယကမ္ဘာ၏အထုနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုနိုင်မည်ဖြစ်လေသည်တစ်ခုစွန့်စားမှုအပေါ်ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။ အဘယျသို့ Self-နိုင်မည်ဖြစ်လေသည်နှင့်တစ်ဦးတပြင်လုံးကိုအသစ်ဖွင့်ကမ္ဘာဖန်တီးခြင်းထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သနည်း အရင်းရှင်ဝါဒလူမျိုး၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကန့်သတ်, ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေအထိပထမဦးစွာ Worlders ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကောင်းသောအသက်တာကိုစဉ်းစားသည်ကစွန့်စားမှု၏အသက်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖြစ်သင့်, အဆုံးမဲ့သုံးစွဲမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အရင်းရှင်ဝါဒဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အရာကိုကမ်းလှမ်းမှုသက်သက်ပါ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒက တေ့ာ့အနစ်သာရပြည့်ဝမှုဖြင့်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ် (၃) အနာဂတ
ပထမကမ္ဘာရဲ့ဘဝ နေထို်င် မှုဟာ မတည်မြဲပါဘူး ပထမကမ္ဘာလူဦးရေဟာ သူတို့ပြုမူနေထိုင်သလိုဆက်လက်ရှင်သန်သွားပါက သူတို့ကိုယ်သူတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးရုံတောင် မကပါဘူးကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းထိခိုက်ပါတယ် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟာပိုမိုခိုင်မာ တညိငြိမ်သော လူသားတွေနင့် သဘာဝတရားကြားတွေညီတူညီမျှ ဆက်သွယ်မှုအားပေးစွမ်းနိင်ပါတယ် အရင်းရှင် ဂါဒဟာ အနာဂတ်ကိုစီးပွားရေးဆိုင် ရာငရဲအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဆို ရှယ်လစ်စနစ်က တော့ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေဟာ ပျော်ရွှင် ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့အရာမျိုးုးပေးစွမ်းနိင် ပါတယ်
အရင်းရှင် ဝါဒဟာ အကျိုးအမြတ်အတွက် မ ရေမတွက် နိင် သော စစ်ပွဲများကိုဖန်တီးပေးပါတယ် ပထမကမ္ဘာသားမြောက်များစွာထိုစစ်ပွဲများတွင် သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ် ဒီရာစုနစ်တွေရဲ့အဆိုးရွာဆုံးစစ်ပွဲတွေက တေ့ာနယ်ချဲ့တွေရဲ့ စစ်ပံွဲဲများဖြစ်တဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်နင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်များဖြစ်ကြပြီးပထမကမ္ဘာသားများအများအပြားပါဝင် ကာလူသန်းပေါင်းများစွာသေ ကြေပျက်စီးခဲ့ကြရပါတယ် ဆို ရှယ်လစ်ဝါဒဟာ အကျိုးအမြတ်အတွက် ဘယ်သူကမှဘယ်စစ်ပွဲမှာမှ မ သေဆုံးရဘူးဆိုတာအာမခံပေးနိင် ပါတယ် ဘယ်သူမှဒီလိုကပ်ပါးအဆင့် အတန်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ ရန် မ သေ ဆုံးစေ ရပါဘူးဘယ်သူမှဒီလိုအဓိပ္ပာယ် မရှိသောလမ်းနင့် မ သေဆုံးစေရပါဘူး ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟာ နယ်ချုဲံစနစ်စစ်ပွဲများမှငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆောင် ကျဉ်းပေးနိင် ပါတယ်
ကံဆိုးစွာနင့် ဘဲ ဒီဆို ရှယ်လစ်စနစ်မ ပထမကမ္ဘာသားများအတွက်ှအကျိုးအမြတ်များဟာ လူမှုအ ခြေခံအဖြစ်ပထမကမ္ဘာအတွက် မတည်ဆောက် နိင်ပါဘူး ပထမကမ္ဘာလူတွေဟာအချိန်တစ်ခုအတွက်သူတို့လူဦးရေ တန်ပြန်မှုများကိုဆက်လက်လုပ် ဆောင် နေအုံးမှာပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆို ရှယ်လစ်စနစ်ဟာ အပြစ်ပေးမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး လွတ်မြောက်မှုတစ်ခုပါဘာပဲဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုမှန်ကန်စွာ နေရာချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ရဲ့စိတ်ဓာတ်များကိုမစွန့်လွှတ်နိင် ပါဘူး အဲဒီမှာ အမှားတစ်ခုမှ မရှိဘဲဖြစ်ပါစေ လူသားမျိုးနွယ် ရဲ့လွတ်မြောက် မှုာဟာ ပထမကမ္ဘာရဲ့ဘဝပုံစံရဲ့ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကြောင့် ပါ အဆုံးမှာ ရေ ရှည်မှာ အဲဒါဟာ ပထမကမ္ဘာသားတွေကိုယ်တိုင် အတွက်ပင် ကောင်းတဲံ့အချက်ဖြစ်လာမှာပါ
Category : စီးပြားေရးမ်ား/Economics, ပတ္ဝန္းက်င္/Environment, သီအုိရီ/Theory
← ငလ်င္ ေတြဟာ သ ဘာဝ ပါ ဒါေပမယ့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက ေတာ့ လူသားေတြ ရဲ့ဖန္တီးမွုပါ
ကမာ႓အသစ္စိန္ေခၚမွုအသစ္ သိပံၸပညာအသစ္ →